Iindaba -Imarike yezixhobo zokwahlula-hlula komoya: Kulindeleke ukuba iphumeze ukukhula kwemali engekahlawulwa ngo-2020 ukuya ku-2026
"Ingxelo Ingqondo ibonelela ngengxelo yakutshanje ngohlalutyo kunye noqikelelo lwentengiso yezixhobo zokwahlula umoya ukusuka ku-2020 ukuya ku-2026. Ingxelo inikezela ukuqonda okubalulekileyo kwaye inikezela abathengi ithuba lokukhuphisana ngeengxelo ezineenkcukacha. Ukongeza, ingxelo igxile kubadlali abakhulu kwi Icandelo lomoya wokwahlula izixhobo ukucacisa nokuhlalutya umthamo wentengiso, ixabiso, isabelo sentengiso, ukhuphiswano lwembonakalo yelizwe kunye nophuhliso lwamva nje.
Iimarike zezixhobo zokwahlula umoya ziya kukhula ukusuka kwi-XXX ngo-2019 ukuya kwi-XXX ngo-2026, ngexabiso eliqikelelweyo lokukhula ngonyaka kwi-XX. Unyaka osisiseko oqwalaselwe kolu phando yi-2019, kwaye ubungakanani bemakethi kulindeleke ukuba busuke ukusuka kwi-2020 ukuya kwi-2026.
Okokuqala, ingxelo ibonelela ngesishwankathelo esisiseko seshishini, kubandakanya neenkcazo, ukuhlelwa, usetyenziso kunye nezisombululo zeshishini. Uhlalutyo loshishino lwezixhobo zomoya lubonelelwe kwintengiso yehlabathi, kubandakanya nembali yophuhliso, uhlalutyo lwezahlulo, uphuhliso olukhulu lwengingqi kunye novavanyo olubanzi lwabakhuphisana nabo.
Okwesibini, uphonononge imigaqo-nkqubo yokukhula kunye nezicwangciso, kunye neenkqubo zokuvelisa kunye nolwakhiwo lweendleko. Ingxelo ikwaxoxa ngokuhanjiswa kunye nedatha yedatha, idatha yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle, iindleko, amaxabiso, ingeniso, kunye nemida emandla kwimimandla ephambili (enjengeMelika, iYurophu, iTshayina neJapan) kunye neminye imimandla emikhulu. Ukongeza, imakethi yezixhobo zokwahlula umoya iza kuphakamisa uhlalutyo lwendlela yentengiso, izinto zokuqhuba kunye nemiceli mngeni esekwe kwindlela yokuziphatha kwabathengi kunye neendlela ezahlukeneyo zentengiso.
I-coronavirus (i-COVID-19) isasazeka kwihlabathi jikelele, ichaphazela uqoqosho kunye neimarike zehlabathi. Ingxelo ithathela ingqalelo kwaye icacisa ifuthe le-COVID-19 kwintengiso yezixhobo zokwahlula umoya kuwo onke amacandelo emarike, imimandla, amazwe kunye nabadlali abaphambili. Intshona Melika kunye neYurophu ngawona mazwe achaphazeleka kakhulu yi-coronavirus, kwaye ngabona badlali baphambili kuqoqosho lwehlabathi. Ingxelo ihlalutya ngokweenkcukacha ifuthe lentengiso kwimakethi yezixhobo zokwahlula umoya, izicwangciso zokukhula, ukuphazamiseka konikezelo eTshayina, kunye neepateni zokusetyenziswa.
Abavelisi abaphezulu kwizixhobo zentengiso yomoya ezahlulayo zezi: Linde JSC Cryogenic Metal Air Liquid Air Products Taiyo Nippon Sanso Praxair HNEC Hangyang Group Messer Sichuan Air Separation AMCS Air Water Gas Engineering LLC
Ngokuncipha kokukhula koqoqosho lwehlabathi, icandelo lokwenza izixhobo zokwahlula umoya nalo liye lafumana impembelelo ethile, kodwa igcine ukukhula okuqinisekileyo kule minyaka mine idlulileyo. Imakethi yezixhobo zokwahlula umoya emhlabeni igcine umyinge wokukhula komyinge we-XX.X%, ukusuka kwi-XX USD ngo-2018 ukuya kwi-XX USD ngo-2026. Iingcali zethu zentsimi zikholelwa ukuba kule minyaka imbalwa izayo, imakethi yezixhobo zokwahlula umoya iza kuqhubeka ukwandisa 2026.
Ingxelo Ingqondo inikezela umbono ocacileyo wamacandelo ahlukeneyo, anje ngohlalutyo lwamacandelo, abahlalutyi bengingqi, ipotifoliyo yemveliso, elandelwa lulwazi oluneenkcukacha malunga neenkokheli zentengiso kunye nezicwangciso zazo ze-M & A.
Ukuthetha ngokwendawo, le ngxelo ifunda ngabona bavelisi baphambili kunye nabathengi, ijolise kumandla emveliso, imveliso, ixabiso, ukusetyenziswa, isabelo sentengiso kunye namathuba okukhula ale mimandla iphambili, egubungela
Xela i-Intellect isisombululo sakho sokumisa yonke into enxulumene nophando lwentengiso kunye nobukrelekrele bemakethi. Siyakuqonda ukubaluleka kobukrelekrele bemarike kunye neemfuno zayo kwihlabathi lanamhlanje elikhuphisana kakhulu. Iqela lethu lobuchwephesha liza kusebenza nzima ukufumana eyona ngxelo ichanekileyo yophando, ikhatshwa yidatha engenakuthelekiswa nanto, ukuqinisekisa ukuba sinokukuzisela iziphumo ezigqwesileyo ngalo lonke ixesha. Ke ngoko, iqela lethu liya konwaba ukukunika olona ncedo, nokuba yingxelo yakutshanje yomphandi okanye isicelo esenziwe ngokwezifiso.